Cetilistat (282526-98-1) Fekitori yevanogadzira fekitori
CMOAPI ine yakazara yakazara mbishi zvigadzirwa zveCetilistat, uye ine yakazara huwandu hwemhando manejimendi system.Also yakapfuura GMP uye DMF certification.
Cetilistat powder Base Ruzivo
zita Cetilistat powder
Kufarira Grey Powder
Chii chinonzi Cetilistat?
Cetilistat (CAS kwete.282526-98-1) inozivikanwawo seATL-962, ATL 962 kana Citilistat imushonga unoratidzwa pakurapa kufutisa. Inoshandiswa pamwe nekoriori yakaderera, kudya kwemafuta mashoma, uye kurovedza muviri kwakakodzera kubatsira mukudzikira uremu.
Iyo cetilistat anti-kufutisa mushonga unotengeswa pasi pemazita emhando dzakasiyana kusanganisira Cetislim, Kilfat, Oblean, uye Checkwt.
Cetilistat ndeye benzoxazine, gastrointestinal lipase inhibitor iyo inonyanya kushanda nekudzivirira kugaya uye kutora kwemafuta ekudya.
sei Cetilistat inobata kufutisa?
Kufutisa nderimwe rematambudziko ehutano hweveruzhinji munyika nhasi. Iyo yakaoma, isingagumi pamwe neye multifactor kusagadzikana kunoratidzwa nekuunganidzwa kwemafuta akawandisa / adipose tishu.
Kufutisa kunosanganisirwa nematambudziko ehutano senge rudzi rwechipiri chirwere cheshuga, hypertension, hyperlipidemia, cholesterol yakawanda, mamwe kanzira, uye zvimwe chirwere chemoyo chakadai sestroke uye coronary moyo kusagadzikana.
Kufutisa munyika zhinji kwasvika huwandu hwehosha uye nekudaro kunetsekana kwehutano pasi rese.
Kutsvagurudza kunoratidza kuti kurasikirwa kwehuremu kwakasimba kwe5 kusvika ku10% yehuremu hwako hwekutanga hwemuviri kunogona kudzikisira zvakanyanya kusagadzikana kwehutano hwehukama.
Cetilistat inoonekwa seanorwisa-kufutisa mumiriri. Anti-kufutisa vamiririri vanowanzo kuwedzera simba rekushandisa nekudaro kuonda kuburikidza neese neural uye metabolic mutemo.
Cetilistat idumbu remudumbu pancreatic lipase inhibitor iyo inoshanda inorwisa-kufutisa mumiriri muzvidzidzo zvevanhu.
Cetilistat inoshanda nekudzivirira kugaya uye kunwa kwemafuta mukati mechikafu chaunodya. Kana mafuta asina kugayiwa anoburitswa mutsvina panguva yekufamba kwematumbu. Inoita izvi nekudzivisa iyo enzyme lipases inoitisa kuputsa triglycerides (mafuta / lipid mumuviri) mumatumbu.
The cetilistat mhedzisiro saka zvinoratidzwa mudumbu. Saka zvinoreva kuti cetilistat yakasarudzika kubva kune mamwe anopesana-nekufutisa vamiririri ayo anokanganisa uropi hwako kudzikisira chishuwo chekudya nekuti inoshanda parutivi.
Kana kugaya uye kutora kwemafuta ekudya zvikatadziswa, kuisirwa kwemafuta kunogumirwa nekudaro kushandiswa kwesimba kwesimba kunoguma nekudzikira uremu.
Kunyange hazvo, Cetilistat ichizokubatsira iwe kuonda zviri kwauri kuti uchengetedze kudya kwakaderera-mafuta kunovaka pamwe nekurovedza muviri kwekubudirira manejimendi manejimendi.
Zvese cetilistat uye orlistat mishonga yemishonga inoshandiswa pakurapa kufutisa. Ivo vanoratidzira yakafanana nzira yechiito kuburikidza iyo yavanowana kurema kurasikirwa.
Cetilistat uye orlistat ndiwo masisitimu emimba lipases inhibitor iyo inodzivirira kana kuderedza kugaya uye kunwa kwemafuta ekudya. Iyo lipases inokonzeresa kuputsika kwe triglycerides mumatumbu. Iwo asina kuchinjwa mafuta ari panzvimbo anoburitswa kuburikidza ura kufamba mune tsvina yemunhu. Ichi chiitiko chinoona kuti mafuta haana kunyudzwa mumuviri zvichitungamira kuonda.
Kukosha kwekudzikisa huremu kwakataurwa mune zvese cetilistat uye orlistat. Kubudirira kwecetilistat vs orlistat zvinoenderana nemararamiro ako sezvo ivo vachida kuti iwe unamatire kune yakaderera-koriori kudya kunovhengana pamwe neyakajairika kurovedza muviri.
Cetilistat pamwe neorlistat inoratidzira yakagadziriswa glycemic kutonga sezvinoonekwa nekuderedzwa kukuru kweplasma glycosylated hemoglobin. Ivo zvakare anoderedza njodzi yehukama-hwakanangana nekusangana kwakadai sehosha yemoyo, kuwedzerwa kweropa, yakakwira cholesterol mazinga, uye mhando 2 chirwere cheshuga.
Mhedzisiro inowanzoitika inosanganisirwa necetilistat uye orlistat ndiwo maronda emimba kazhinji nekuda kwemafuta asina kuchinja. Nekudaro, kana iwe uchienzanisa cetilistat vs orlistat maererano nemhedzisiro, yakawanda mhedzisiro inosanganisirwa neorlistat kupfuura mucetilistat. Uye zvakare, kuomarara kwemhedzisiro kunonyanya kutaurwa ne orlistat pane necetilistat.
Kana tichienzanisa kushivirira kwecetilistat vs orlistat, cetilistat yakanzi inoregererwa kupfuura orlistat.
Chidzidzo chemavhiki gumi nemaviri chinosanganisira varwere vakafutisa vane chirwere cheshuga cheshuga chakaitiswa kuongorora kurasikirwa, kudzikira kweglycosylated hemoglobin, uye kushivirira kwecetilistat kana ichienzaniswa neorlistat. Mushonga uyu wakasanganiswa neyepasi kusvika pakati nepakati kudya kwemafuta uye chirwere cheshuga mellitus chakakwanisa kushandisa metformin.
Chidzidzo ichi chakawana kuti zvese cetilistat uye orlistat zvakadzora huremu pamwe nekuvandudza glycemic control. Mishonga iyi yakadzorawo njodzi yehutano hwemwoyo nekuderedza chiuno chakakomberedza chinova chiratidzo chehosha yemoyo.
Muchidzidzo ichi, mhedzisiro yakatarwa yaive yemudumbu mhedzisiro iyo yaive yakawanda ne orlistat, uye zvakare kuomarara kwemhedzisiro-inoenderana nemhedzisiro yakawanikwa iri yepamusoro kupfuura iyo yecetilistat. Misiyano yemhedzisiro yecetilistat vs orlistat inogona kuve yakatarwa nekusiyana kwavo kwechimiro uye kwemakemikari.
Kubviswa kubva mukudzidza kwaive nekuda kwemhedzisiro uye kwaive kwakanyanya ne orlistat pane neketilistat Uyezve, cetilistat yaibvumidzwa zvakanyanya kupfuura orlistat.
Ndiani anogona shandisa Cetilistat?
Unogona kufunga kutora Cetilistat (282526-98-1) kana uchida kudzikira. Nekudaro, senge chero mumwe mushonga, tora matanho anodiwa uchitora mushonga uyu.
Cetilistat inokurudzirwa kune vanhu vane body mass index (BMI) iri pamusoro kupfuura 27. Zvinokurudzirwawo kutora cetilistat kana BMI yako iri pamusoro kupfuura makumi maviri neshanu uye uchirwara nemamiriro anoenderana nekufutisa kwakadai seshuga neBP. BMI chiratidzo chemafuta emuviri akaverengerwa nekugovanisa huremu hwako mumakirogiramu nekwere yekukwirira mumamita.
Kana iwe ukasarudza kutora cetilistat, ita shuwa yekutora iyo inokurudzirwa cetilistat dosi pamwe nezvikafu zvako. Iyo yakatemwa cetilistat dosi inonyatsotorwa nekudya, panguva kana kusvika kweawa rimwe mushure mekudya kwako.
Iyo cetilistat chinodhaka inoitika mumacapsule kana fomu yepiritsi yekutungamira nemuromo negirazi remvura Iwe unogona zvakare kuwana cetilistat poda. Iyo chaiyo cetilistat muyero uye nguva yekurapa ichagadziriswa nemupi wako wekuchengeta hutano zvichienderana nemamiriro uye kutanga kupindura kumushonga.
Cetilistat uremu mabhenefiti haasati aratidzwa kuvana, nekudaro haufanire kupa izvi kuvana. Izvi kunyanya zvine vana mukuyaruka sezvo cetilistat inogona kukanganisa kukura kwavo zvakanyanya nehurefu.
Cetilistat inoonekwa seisina kuchengetedzeka kune vanaamai vane nhumbu kana vakadzi vanoedza kubata pamuviri. Inogona kuunza njodzi kuhutano kumwana asati aberekwa.
Vanamai vanoyamwisa vanorayirwa zvakare kuti vadzivise cetilistat sezvo inogona kupfuura nemwana.
Chiremba wako anogona kukuraira iwe kuti utore kana neimwe nzira kudzivirira cetilistat nekuda kwevamwe varipo mamiriro ehutano akadai sehypersensitivity, cholestasis (chirwere chechiropa), uye chisingaperi malabsorption syndrome.
Cetilistat poda inoonekwa seyakachengeteka asi kana iwe ukapfuura iyo yakakurudzirwa cetilistat dosage kana kutadza kuteedzera rairo iwe unowana zvimwe cetilistat mhedzisiro. Iyi mhedzisiro inogona kuitika pakutanga asi iri nyoro uye inofanira kuenda nekuenderera mberi nekushandisa kwechirwere. Kana vasina kuenda, unofanirwa kubata chiremba wako.
Iwo akanyanya kuwanda macetilistat mhedzisiro ndeaya;
Inokurumidza uye inowanzoitika ura kufamba kungave kwakaoma kudzora
Oiri kana mafuta zvigaro
Zvimwe zvisingawanzo asi zvakakomba cetilistat mhedzisiro zvinogona kuitika. Iwe unofanirwa kubvunza chiremba wako nekukasira kana iwe uchinge waona zvinotevera zvakashata mhedzisiro;
Jaundice (yero yero kana muviri wese)
Kuneta zvisina kujairika
Cetilistat kuora kurasikirwa kubatsirwa mukufutisa manejimendi ndiko kushandiswa kukuru kunozivikanwa. Kune zvimwe zvakadaro zvimwe cetilistat mabhenefiti ayo anoita kuti zvisiyane uye zvimire pakati pemamwe ekuremerwa kurasikirwa nemishonga.
Pazasi pane mamwe macetilistat mabhenefiti;
Kubatsira iwe kuchengetedza hupenyu hune hutano kuburikidza nekuremerwa uremu
Cetilistat ndeimwe yeakakura-kurasikirwa madhiragi pamwe neanorwisa-kufutisa mumiriri. Muhupenyu hwako chaihwo kuwana huremu hwakawandisa kunotungamira mukukura kwehukuru nemafuta emuviri anowanzo kunzi sekurema kana kufutisa. Aya mamiriro maviri anosanganisirwa nenyaya dzehutano senge rudzi rwechipiri chirwere cheshuga mellitus, chirwere chemoyo senge sitiroko, yakakwira BP, uye mamwe kanzira senge colon uye mazamu cancer.
Musiyano uripo pakati pevanhu vakafutisa uye vakafutisa ndiwo masero emuviri (BMI). Munhu anoonekwa seakanyanya kufuta kana iyo BMI iri yakakura kudarika kana kuenzana ne25 nepo munhu ane kufutisa aine BMI yakakura kudarika kana yakaenzana ne30.
Kutora cetilistat kunobatsira muviri wako kudzikisa kuwanda kwemafuta nekudaro kuchengetedza hutano hwakanaka hweBMI uye zvichidaro nemararamiro ane hutano. Izvi zvakadaro nekuti inoderedza mikana yemamiriro ezvinhu anotyisidzira hupenyu ane chekuita nekufutisa.
Inobatsira mukudzikira uremu uye kudzikiswa kweiyo glycosylated hemoglobin mune vakafuta vane chirwere cheshuga
Chirwere cheshuga uye chakanyanya kutaipa 2 chirwere cheshuga chinonzi zvakare chirwere cheshuga mellitus chirwere chakajairika mune vakawandisa varwere. Rudzi rwechipiri chirwere cheshuga chinoitika kana masero emuviri achirwisa kuita kwakaringana kweiyo insulini, inova yekunanga shuga yeropa mumasero. Izvi zvinotungamira mukuunganidzwa kweglucose muropa. kufutisa kunozivikanwa kuwedzera zvakanyanya kuitika kwerudzi rwechipiri chirwere cheshuga.
Glycosylated hemoglobin (hemoglobin inosungirwa glucose) chiyero chenguva refu cheshuga mellitus control. Iyo mwero we glycosylated hemoglobin (HbA1c) inoratidza avhareji yeropa glucose mukati memwedzi mitatu yapfuura. Iyo yakajairwa glycosylated hemoglobin level i7% asi vanhu vazhinji vane chirwere cheshuga vanokwanisa chete 9%.
Mune 12-vhiki, yakasarudzika, kiriniki yekudzidza ine placebo control, varwere vakafutisa vane mhando 2 chirwere cheshuga vakapiwa cetilistat (40, 80, kana 120mg katatu zuva nezuva). Ivo zvakare vaifanira kunamatira kune hypocaloric chikafu. Cetilistat yakawanikwa ichideredza zvakanyanya huremu pamwe nekuderedza glycosylated hemoglobin (HbA1c). Izvo zvakaonekwa zvakare kuti cetilistat yaibvumidzwa zvakanaka.
Cetilistat inoregererwa zvakanaka
Kunze kwekushanda kwayo mukuderedza huremu uye kugadzirisa kufutisa, kune zvimwe kwazviri. Cetilistat inoregererwa mumuviri ine zvinyoro kusvika kune zvine mwero mhedzisiro izvo zvinokwanisika uye zvinogona kutsakatika nekuenderera kwekushandisa cetilistat.
Kunyangwe vazhinji vedu tichienda kunoshanda mumushonga, zvakare zvakanaka kutsvaga mushonga unoshivira mumuviri wako.
Muchikamu chechipiri kiriniki yekudzidza yakaitiswa kwemavhiki gumi nemaviri ichishandisa zvese cetilistat uye inowanzo kuwanikwa orlistat. Iyo miviri yekurema-kurasikirwa mishonga yakawanikwa ichishanda mukuderedza huremu, ichideredza glycosylated hemoglobin pamwe nekuderedza chiuno chakakomberedza. Zvakare, cetilisat yakawanikwa yakashivirirwa zvakanaka kupfuura orlistat, iine mashoma uye mashoma mashoma mhedzisiro ane chekuita necetilistat.
Inokubatsira iwe kuzadzisa zvinangwa zvako mukati menguva pfupi
Kurera huremu chinangwa chenguva pfupi chinogona kuwanikwa kuburikidza nekuchinja kwekudya uye pamwe chete nekurovedza muviri. Zvisinei, kuchengetedza huremu hune hutano chinangwa chenguva refu.
Chiremba wako anogona kukurudzira mushonga wekurasikirwa nemushonga kana mararamiro ane hutano (kudya uye kurovedza muviri) asingakwanise kurasikirwa kwehuremu. Cetilistat ndeimwe yemishonga iyo inogona kushandiswa pamwe neakaderera-mafuta kudya uye kugara uchirovedza muviri. Kusiyana nedzimwe mishonga yekurwisa kufutisa iyo inotora nguva yakareba kuti ikwanise kuonda kurasika, cetilistat inotora angangoita mavhiki gumi nemaviri kuti ipe huremu hunodiwa.
Inogona kubatsira kudzikisa cholesterol yako
Cholesterol inoreva chinhu chine waxy. Inotarisirwa nemuviri wako kuvaka maseru zvisinei, zvakawandisa zvinogona kukonzera nyaya mumuviri.
Cholesterol inogadzirwa nechiropa asi imwe ichibva muzvikafu zvaunodya zvakadai senyama, huku, uye zvigadzirwa zvemukaka zvine mafuta. Kune maviri marudzi echolesterol. Low-density lipoprotein (LDL) cholesterol kana iyo "yakaipa" cholesterol uye yakakwira-density lipoprotein kana iyo "yakanaka" cholesterol. Iyo LDL inobatsira kune mafuta ekuvaka-mukati mutsinga nokudaro inowedzera njodzi yezvirwere zvemwoyo senge sitiroko uye chirwere chemwoyo.
Kunyanya kufutisa kunowedzera mukana wako wecholesterol yakakwira. Kufutisa kunowedzera huwandu hweLDL cholesterol nekuchinja mhinduro yemuviri wako kumafuta aunodya. Iko kuzvimba kunokonzerwa nekufutisa kunoderedzawo muviri wako kupindura shanduko mukudya kwemafuta kudya. Mukuwedzera, insulin kushorwa inowanzoitika kune varwere vane kufutisa. Izvi zvinokanganisawo zvakajairika maitiro emafuta mumuviri wako.
Cetilistat inogona kudzora yakazara cholesterol pamwe neLDL cholesterol.
Mune chidzidzo chinosanganisira makonzo, cetilistat inoitiswa nemuromo yakawanikwa kugadzirisa kuneta uye yakazara cholesterol.
Inoderedza njodzi yehutano hwemwoyo
Chirwere chemwoyo ishoko rinobatanidza rinoreva kusagadzikana kunokanganisa moyo kana mitsipa yeropa. Chirwere chemoyo chinosanganisira coronary artery hosha dzakadai sekurwadziwa kwemoyo uye angina, sitiroko, kutadza kwemoyo, uye rheumatic chirwere chemoyo pakati pevamwe.
Icho chinokonzera chirwere chemoyo chinosiyana zvichienderana nechakakanganisika chirwere. Semuenzaniso, chirwere chetsinga, sitiroko, uye chirwere chetsinga chinogona kukonzerwa neBP, chirwere cheshuga cheshuga, kuputa, kushaya kurovedza muviri, kufutisa, uye kudya zvisina tsarukano. Kufutisa kunofungidzirwa kuverengera angangoita mashanu muzana ehutano hwemwoyo.
Cetilistat, nekudaro, inoderedza njodzi yehosha yemoyo nekurapa kufutisa uye kukurudzira kudya kunovaka kunoita basa mukudzivirira kuitika kwekushungurudzika kwemoyo.
Muvhiki gumi nemaviri zvakasarudzika, zvakapofumadza-zvakapofumadza zvinosanganisira vakafutisa varwere vane chirwere cheshuga, cetilistat yakapihwa pa12, 40, kana 80 mg katatu zuva nezuva. Vatori vechikamu vakakurudzirwa zvakare kuti vachengetedze chikafu chine mafuta mashoma panguva yekudzidza.
Ichi chidzidzo chakaratidza kudzikisira kurema pamwe nekuvandudza glycemic control. Uye zvakare, kwaive nekuderedzwa kwakakosha muchiuno chakatenderedza iyo ndeimwe yezvinhu zvine njodzi muhutano hwemwoyo.
Dai dzikisa yako BP
Kuwedzera kweropa kunodanwawo sehypertension chiitiko umo simba reropa rinopesana nemadziro etsinga rinogara rakasimudzwa kwenguva yakati. Hypertension ine njodzi sezvo ichimanikidza moyo kuti ushande zvakaomarara zvichitungamira mukuomesa kwetsinga.
Hypertension inosanganisirwa nezvimwe zvinotyisidzira hupenyu zvakadai sitiroko, itsvo, uye chirwere chechiropa pakati pevamwe.
Kuwedzeredza kana kufutisa kunomutsa mikana yako yekukura kweBP. Ropa rako rinowedzera nekuwedzera kwehuremu.
Izvo, saka, zvinoreva kuti kurasikirwa uremu ndiyo imwe yenzira dzekudzikisa yako BP. Apa ndipo panopinda cetilistat nekuti inotungamira kune yakakosha uremu kwenguva pfupi.
Ndingaenda kupi ini Tenga Cetilistat?
Kana iwe ukafunga kushandisa cetilistat tenga pamhepo pane nyaradzo yeimba yako. Cetilistat powder inowanikwa online mu cetilistat vanotengesa kana cetilistat vagadziri zvitoro. CMOAPI ndeimwe yevanogadzira cetilistat vanotengesa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvine basa rakanaka revatengi.
Kana uchitenga cetilistat poda kana imwe nzira cetilistat capsules kubva CMOAPI kana vamwe vatengesi vecetilistat vanonyatso tarisa iwo mazita ekushandisa kwakakodzera kwemushonga. Funga nezveyakakurudzirwa cetilistat muyero sekurairwa necetilistat mugadziri asiwo tevera kurudziro nemupi wako wekuchengeta hutano.
kuverenga cetilistat wongororo kubva pane zvakaitika kwauri zvinogona kukubatsira kuti unzwisise zviri nani kushanda kwayo pamwe nekuchengetedza. Vazhinji vatengi vecetilistat vanotenga online uye vanogona kusiya cetilistat kuongororwa zvichienderana nezvavanosangana nazvo.
Mutengo weCetilistat iri zvakare kufunga kana iwe uchida kuitenga. CMOAPI ndeimwe yevatengesi vecetilistat vanogona kunge vachipa mutengo wemakwikwi wecetilistat. Nekudaro, mitengo yecetilistat haifanire kukupofumadza iwe kuti usarudze yakashata yemhando chigadzirwa.
Kutenga kubva kunyaradzo yeimba yako kunogona kuyedza kutenga nekukurumidza, zvisinei, iwe uchiri kuda kuita gadziriro dzakakodzera kuti uzive kuwanikwa kwemishonga iwe yaunoda kare.
Bryson, A., de la Motte, S., & Dunk, C. (2009). Kuderedzwa kwekudya kwemafuta kunwa neinovhiya gastrointestinal lipase inhibitor cetilistat mune vane hutano vanozvipira. British bhuku remakiriniki emakemikari, 67(3), 309–315. https://doi.org/10.1111/j.1365-2125.2008.03311.x.
Hainer V. (2014). Mhedziso yezvitsva antiobesity zvinodhaka. Nyanzvi maonero pamusoro pe pharmacotherapy, 15(14), 1975–1978. https://doi.org/10.1517/14656566.2014.946904.
Kopelman, P., Groot, G., Rissanen, A., Rossner, S., Toubro, S., Palmer, R., Hallam, R., Bryson, A., & Hickling, RI (2010). Kurera huremu, HbA1c kudzikisira, uye kushivirira kwecetilistat mune yakasarudzika, placebo-inodzorwa chikamu chechipiri kutongwa mune vakawandisa vane chirwere cheshuga: kuenzanisa ne orlistat (Xenical). Kufutisa (Sirivha Chitubu, Md.), 18(1), 108–115. https://doi.org/10.1038/oby.2009.155.
Kopelman, P; Bryson, A; Hickling, R; Rissanen, A; Rossner, S; Toubro, S; Valensi, P (2007). "Cetilistat (ATL-962), inoverengeka lipase inhibitor: Chidzidzo che12-vhiki yakasarudzika, inodzorwa ne placebo-inodzora yekudzikisa huremu kune varwere vakafutisa". International Zvinyorwa zveKufutisa. 31 (3): 494–9. doi: 10.1038 / sj.ijo.0803446. PMID 16953261.
Padwal, R (2008). "Cetilistat, nyowani lipase inhibitor yekurapa kufutisa". Pfungwa Dzazvino Mukutsvagisa Zvinodhaka. 9 (4): 414– PMID 18393108.
Yamada Y, Kato T, Ogino H, Ashina S, Kato K (2008). "Cetilistat (ATL-962), inoverengeka pancreatic lipase inhibitor, inovandudza huremu hwemuviri uye inovandudza mapid profiles mumakonzo". Hormone uye Ongororo yeMetabolic. 40 (8): 539– doi: 10.1055 / s-2008-1076699. PMID 18500680. S2CID 29076657.